च्याम्पियन्स लिगमा एमबाप्पेले तोडे मेसीको कीर्तिमान – bampijhyala.com
Home > खेलकुद > च्याम्पियन्स लिगमा एमबाप्पेले तोडे मेसीको कीर्तिमान
च्याम्पियन्स लिगमा एमबाप्पेले तोडे मेसीको कीर्तिमान
२५ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:२१ bampijhyala
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । पेरिस सेन्ट जर्माइनका फरवार्ड कालियन एमबाप्पे युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा सबैभन्दा कम उमेरमा २० गोल पुु¥याउने खेलाडी बनेका छन् । उनले यस क्रममा लियोनल मेसीको रेकर्ड तोडे ।
एमबाप्पले इस्तानबूल बासाकसेहिरविरुद्ध बुधबार ४२ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गरे । यससँगै उनी २१ वर्ष ३ सय ५५ दिनमा च्याम्पियन्स लिगमा २० गोल पूरा गर्न सफल भए ।
लियोनल मेसीले च्याम्पियन्स लिगमा २२ वर्ष २ सय ६६ दिनमा गोलसंख्या २० पुु¥याएका थिए । कम उमेरमा २० गोल पुु¥याउने खेलाडीको सुचीमा राहुुल तेस्रो, अलेस्यान्द्रो डेल पियरो चौथो र करिम बेन्जामा पाँचौ स्थानमा छ । बाप्पेले यसअघि मोन्टेपिल्लरविरुद्धको खेलमा पिएसजीका लागि १ सय गोल गर्ने किर्तिमान बनाएका थिए ।
बासाकसेहिर र पिएसजीबीचको खेल मंगलबारका लागि तय थियो, तर फोर्थ अफिसियलले बासाकसेहिरका एसिस्टेन्ट पिर्रे वेबोलाई ‘काले’ भनेपछि रंगभेद विवाद सुुरु भयो र खेल बुधबारका लागि सारियो । बुधबार खेल सुरु हुनअघि पिएसजी र बासाकसेहिरका खेलाडीहरुले घुुँडा टेकेर रंगभेदविरुद्ध गतिलो सन्देश दिए । दुुबै पक्षका खेलाडीहरुले वार्मअपका दौरान ‘नो टुु रेसिजम’ लेखिएको सर्ट पनि लगाएका थिए ।
नेपाल बाल संगठन दोलखामा राम प्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिती गठन
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १२:५८ bampijhyala 0
एटलेटिको म्याड्रिड लिग तालिकाको शीर्षस्थानमा
३ जेठ, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । गएराति भएको स्पेनिस ला...
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार १९:३३ bampijhyala 0
१ जेठ, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नेपाल सुपर लिगको उपाधि...
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? २५ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:२१
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव २५ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:२१
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २५ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:२१
अनाधिकृत रुपमा रकम संकलन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको आग्रह २५ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:२१
झीगु नेवाः भाय् या यें, यल व ख्वप भाषिका जक मखु कि दोलखा नेवाः भाय् , पहरिभाय्, प्यांगाभाय् थें नां जाःगु च्यागु झिगु कचा भाषिका दु । २५ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:२१